निर्मला प्रकरणले संसदमा हंगामा, कांग्रेस सांसद भड्किएपछि ... (भिडियो), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
निर्मला प्रकरणले संसदमा हंगामा, कांग्रेस सांसद भड्किएपछि ... (भिडियो)
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा कन्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्यारालाई कारबाही गर्न आनाकानी गरेको र सरकारबाटै दोषी बचाउने काम भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसद अवरोध गरेको छ ।
बैठक सुरु हुन लाग्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित सांसदहरु सिटबाट उठेर विरोध जनाएका हुन् । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले ५० दिन भैसक्दा पनि दोषी पत्ता लगाउन नसक्नुले यो प्रकरणमा सरकार संरक्षित ठूलै शक्तिको चलखेल रहेको आरोप लगाए । उनले वर्तमान सरकार कुन शक्तिले चलाएको छ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग जवाफ मागे ।
कांग्रेस सांदहरुले वैठक अवरोध गरेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारको तर्फबाट जवाफ दिन रुलिङ गर्ने बताए पनि कांग्रेस सांसदले बैठक चल्न दिएनन् । महरालै धेरै पटक बसिदिन र बैठक सुचारु गर्न सघाउन आग्रह गरे तर मानेनन् । अन्ततः १० मिनटको लागि बैठक स्थगित गर्नु परेको थियो ।
हेर्नुस् संसदमा यसरी भड्किए कांग्रेस सांसद